बाढीबाट गरिब बढी मारमा – Maitri News
बाढीबाट गरिब बढी मारमा
सिरहा । ‘बाढीले घर बगायो, खाने बस्ने अवस्था रहेन। अब कहाँ जानु ? के गर्नु ? यसरी बाढीले दिएको पीडा सुनाउँछन् लहान नगरपालिका–२० का रामस्वरूप राम। उनी तीन दिनदेखि घरपरिवारका सदस्यसहित लहान–१ का आधारभूत विद्यालयमा बसिरहेका छन्। उनले भने, ‘गरिबको पोल्टामा बाढी ’ भएपछि जस्तापाताले छाएको घर पनि अविरल वर्षाले बगायो।’
एकछिनमै बाढीले घर बगाएपछि जिउमा लगाएको कपडाबाहेक केही बचाउन नसकेको गंगिया सदायले सुनाइन्। उनी पनि जलेश्वर सदायसँगै त्यही विद्यालयमा आश्रय लिएर बसेकी छन्। यी दुई परिवारजस्तै यस विद्यालयमा ५० घरपरिवारका ३ सयभन्दा बढीले आश्रय लिएका छन्। सुरक्षाकर्मीको टोलीले उनीहरूलाई उद्धार गरी त्यहाँ राखेका छन्।
उनीहरू लहान नगरपालिका १, २, २० र २१ का हुन्। केहीको घर डुबानमा परेको छ भने केही घर पानीले भत्काइदिएको छ। भबरा नहरमा आएको पानीले उनीहरूको घर डुबान भएको हो। उनीहरूले राहतस्वरूप विभिन्न संघसंस्थाबाट पाएको चामल, दाल एकै ठाउँमा पकाएर खाने गर्छन्।
Previous Previous post: नेपालमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर
Next Next post: चिनियाँ लगानीको सिमेन्ट उद्योगमा बाढी